Mhingaidzo of fallopian mhango
imi muri pano: musha pamuviri Mhingaidzo of fallopian mhango
Ingangoita muzviitiko mana hadzi kushaya mbereko iri kukonzerwa mhingaidzo ari fallopian mhango. It ari fallopian mhango muchangosangana, nokuti vakagamuchira zai kubva ovary, uye dawo urume. zygote, akaumba pashure kwemapazi vechirume pabonde masero, kunotangira mumba uterine mhango, uye apo wanamatira rusvingo. Nokuti upenyu vakadzi zvokurwara ichi, nyanya, Kutyisidzira havapo, asi kuwana zvipingamupinyi zviri fallopian mhango (kunyange sezvo Ezvipikiri Extensions pamuviri) angandidzivisa chirongwa pakunambwa anowanzoita kuitika.
The zvinokonzera mhingaidzo pamusoro fallopian mhango zvakawanda:
Benign uye nyanyisa neoplastic maitiro ari fallopian mhango.
Consequences vakaperekedza dzokurapa pamuviri uye zvomusejari kupindira pane abdominal zvomukati.
Pakakundwa dzokubereka nadzo tibhii.
Vachiberekwa anomalies vari nemamiriro fallopian mhango.
Zvinotapukira dzokubereka nadzo.
The dysfunction of hormone hurongwa.
Mhingaidzo of fallopian mhango: zviratidzo.
Kakawanda zvokurwara ichi ane nani zvekuchipatara stёrtuyu. Mhingaidzo of fallopian mhango, zviratidzo, iyo haina zvakajeka akaratidza, uyewo kusavapo kugeza munyika isiri pamuviri, Anotanga vavhiringe mukadzi kunowanzobatsira pashure dzinoverengeka kundikana kuedza chete kuti pamuviri. dzimwe nguva chete pane zviratidzo zvakadai, sezvo cheminyerekete kurwadziwa yepazasi mudumbu, ane vaivhomora hunhu. Ungazvidyawo kuwana marwadzo panguva yekutevera, zhinji shora kubuditsa, uye tisingabatanidzi Pau- uye marwadzo panguva kurara.
Pashure kwazvo muunganidzwa zviratidzo, vatanga pamusoro chirwere maitirwo asimbise zvokuongorora. Basic nzira nokuti kutsunga mhingaidzo ari fallopian mhango:
Transvaginalьnый gidrolaparoskopicheskiй nzira.
Mabatirwo mhingaidzo ari fallopian mhango.
Mabatirwo mhingaidzo ari fallopian mhango zvichaita zvikurukuru pakuti zvikuru sei achimhanya zvokurwara ichi, zvikonzero izvo zvakakonzera naye uye unhu zviratidzo. Mune zvimwe zviitiko, zvakakwana normalize ari hormone kubvisa kunyanya kushushikana. In anogumbura zvirwere kunoratidza zvinodhaka antibacterial, physiotherapy, uye mune zvimwe zviitiko kuvhiyiwa. Chero zvazvingava, pakuonekwa rokutanga vakafunga Tubhari mhingaidzo vanofanira kutsvaka zano kurapwa pakarepo.